मकर सङ्क्रान्तिको शास्त्रीय र वैज्ञानिक महत्त्व, कहाँकहाँ कसरी मनाइन्छ माघे सँग्राती ? – Complete Nepali News Portal
मकर सङ्क्रान्तिको शास्त्रीय र वैज्ञानिक महत्त्व, कहाँकहाँ कसरी मनाइन्छ माघे सँग्राती ?
ScotNepal February 12, 2018
भौगोलिक, जातीय र सांस्कृतिक विविधता रहेको नेपालमा एकै दिन पर्ने र एउटै नामको पर्वलाई पनि भिन्नभिन्न भेग र समुदायमा भिन्नभिन्न ढंगले मनाउने प्रचलन छ । यसको उदाहरण माघे सङ्क्रान्ति पर्व हो । मकर सङ्क्रान्तिको अर्को नाम माघे सङ्क्रान्ति हो । यो पर्व माघ महिनाको सुरुवातको दिन अर्थात् माघ १ गतेको दिन पर्दछ । यस पर्वलाई थारु समुदायले माघी भनेर मनाउँछन् र नयाँ वर्ष मान्ने गर्छन् । नेपालको समस्त भूभाग, हिमाल, पहाड र तराईका बसोबास गर्ने छेत्री, बाहुन, राई, लिम्बु, नेवार, गुरुङ, मगर आदि सबै जनजातीले माघे सङ्क्रान्तिलाई आआफ्ना परम्परा, भिन्नभिन्न विशेषता र प्रकृतिले मनाउने गरेको पाइन्छ ।
ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा सूर्यले धनु राशीबाट मकर राशीमा सङ्क्रमण गरेको दिन भएकाले यस दिनको नाम मकर सङ्क्रान्ति रहन गएको हो । सूर्यको उदयबिन्दु दक्षिणतर्फबाट उत्तरतर्फ सर्ने भएकाले यस दिनबाट उत्तरायण सुरु हुन्छ भन्ने मान्यता छ । उत्तरायणको अवधिमा तुलनात्मक रूपमा दिन लामा हुने र तापक्रममा बृद्धि भई गर्मी मौसमको प्रारम्भ हुने गर्दछ । त्यसैले पनि यस दिनको छुट्टै खगोलीय महत्त्व छ । माघे सङ्क्रान्तिका दिन विशेष गरी वनतरुल, सखरखन्न(सुठुनी), खुँदो, चिउरा, घिउ, चाकु र विभिन्न परिकारहरू तयार पारेर खाने गरिन्छ । माघे सङ्क्रान्ति आउनुभन्दा एक दुई दिन अगाडि सङ्क्रान्तिको दिनलाई भनेर गाउँघरतिर आफ्नो घरमा भएका गल, बाउसो, खन्ती आदि खन्ने चिजबीज बोकेर नजिकको वनतर्फ लाग्ने मानिसहरूको भिड देख्न पाइन्छ । यस दिनमा तिलको होम र दान गर्नाले वा खानाले अथवा प्रयोग गर्नाले त्यो व्यक्ति कहिल्यै असफल हुँदैन भन्ने धार्मिक विश्वास पनि छ । उक्त दिन नदीका दोभानमा गई शुद्ध भई सिधा दान गर्नाले पुण्य प्राप्त भई रोगब्याधिबाट मुक्त भइने जनविश्वास पनि छ । धार्मिक दृष्टिले मात्र होइन, वैज्ञानिक तबरबाट पनि माघे सङ्क्रान्तिलाई उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिएको छ । धार्मिक रूपले यस दिन कुनै मानिसले घर, आँगन र आफ्नो शरीर शुद्ध बनाउन सकेन भने सात जन्मसम्म पनि ऊ निर्धन र रोगी हुन्छ भन्ने मान्यता छ, त्यस्तै वैज्ञानिक दृष्टिकोणले हेर्दा पनि यस पर्वमा परम्परा र संस्कार जीवन्त तुल्याउन गरिने सम्पूर्ण कार्यबाट मानिसको सरसफाइ हुने, मौसमअनुरूपका पोषक चिजबीज खाइने तथा निरोगी भइने हुनाले यो सकारात्मक नै देखिन्छ । माघेसङ्क्रान्तिलाई हाम्रो देशमा थरिथरिका जनजातीले किसिमकिसिमले मनाउने चलन छ, यस आलेखमा हाम्रो देशका बेग्लाबेग्लै ठाउँमा बसोबास गर्ने भिन्नभिन्न जनजातीसँग रहेको यस पर्वको सम्बन्ध र त्यसले सञ्चरण गर्ने एकता र सद्भावको सन्देशलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।
यद्यपि उपत्यकामा सबै भागका जनताको उपस्थिति पाइन्छ तापनि यहाँका रैथाने भनेका नेवार जनजातीका मानिसहरू हुन । नेवार समुदायमा विशेष किसिमको एउटा खाद्यवस्तुको नामबाट यस पर्वको नामकरण गरिएको छ । नेवारहरू यस पर्वलाई ‘घ्यूचाकु सँल्हु’ भन्दछन । यस दिन उनीहरू चाकुमा तिल मिसाएर लड्डु बनाई खाने र दान दिने काम गर्दछन् । बिहानै उठेर स्नान गरी घरको सम्पूर्ण भाग सरसफाई गर्ने, देवी देवताको पूजा गर्ने, चोखोनितो गरी विभिन्न परिकारहरू तयार पार्दछन् र घरपरिवारका सम्पूर्ण मानिस जम्मा भएर मिठामिठा परिकारको स्वादमा रमाउँदै, घाम ताप्दै एक आपसमा दुःखसुखका गफमा रमाउँदै, भजनकीर्तन गर्दै यस पर्वलाई मनाउने गर्दछन् । यसै दिन भक्तपुर जिल्लाको टौमढी टोलमा तिलमाधव नारायणको मन्दिरमा मेला लाग्ने र दीपङ्कर बुद्धको पूजा हुने गर्दछ । तिलमाधव नारायणको मन्दिरमा चढाइएको घिउ सन्तान नभएका महिलाले नुहाइधुवाइ गरी शुद्ध भई खाएमा सन्तान प्राप्ति हुने विश्वास गरिन्छ । माघे सङ्क्रान्तिका दिन नारायणको मूर्तिभरि घिउ दलेर तिल चढाउने र उक्त घिउ–तिल चार दिनपछि झिकेर मन्दिरमा आउने भक्तजनलाई प्रसादका रूपमा वितरण गर्ने परम्परा छ । त्यस्तै उपत्यका नजिकैको पनौतीमा मकर मेला लाग्छ । लिच्छवि कालीन राजा मानदेवको पालादेखि नै सुरु भएको अनुमान रहेको यो मेलामा असङ्ख्य भक्तजनको जमघट हुने गर्दछ ।
यसैगरी माघे सङ्क्रान्तिका दिन झापा जिल्लाको प्रसिद्ध धार्मिक नदी कन्काईमा हिन्दू धर्मावलम्बीले मकर स्नान गर्छन् । सङ्क्रान्तिदेखि पाँचदिनसम्म कन्काई नदीको वरिपरि रमाइलो मेला लाग्ने र किराँत परम्परा एवं संस्कृतिअनुरूप धाननाच देखाइने प्रचलन छ । कन्काई नदीलाई भगवती शीतला माईका रूपमा मान्ने गरिएको हुँदा आफ्नो मनोकाङ्क्षा पूरा गर्न भाकल गर्ने नेपालको पूर्वी क्षेत्र तथा भारतको सिलिगुडी, दार्जिलिंग र सिक्किम क्षेत्रका नेपालीभाषी भारतीय पनि कन्काई नदीमा आएर मकर स्नान गरी पूजाआजा गर्ने, परेवा उडाउने र बत्ती बाल्ने गर्छन् ।
थारू समुदायमा यो पर्व माघी पर्वका रूपमा बडो उत्साहका साथ मनाइन्छ । थारुहरू यस पर्वलाई माघी भन्दछन् । पूर्वका थारुले मिथिलाञ्चलमा मनाए झैं नै यस पर्वलाई मनाउने गरेको देखिए पनि खासगरी राप्तीपश्चिमका थारुहरूको मौलिक संस्कृति समावेश भएको यो पर्व सबैभन्दा ठूलो र विशिष्ट पर्व हो ।
थारुसमाजमा पुस मसान्तका दिन सुँगुर काटेर यो पर्व सुरु हुन्छ, त्यस दिनलाई जितामरना दिन भनिन्छ । उक्त दिन घरघरमा सुँगुरको मासु, ढिकरी (पिठोको एक परिकार), माछालगायतको परिकार बनाएर जाँड–रक्सीका साथ खानपिन गरेर रातभर नाचगानका साथ रमाइलो गर्ने प्रचलन छ । भोलिपल्ट बिहान सबै जना नजिकैको खोलानालामा नुहाउन जाने चलन छ । यसलाई माघलहान भन्ने गरिन्छ । नुहाइसकेपछि घरमा आई दाल, चामल, नून छोएर आफूभन्दा ठूलालाई ढोग गरी आशीर्वाद लिइन्छ । माघ २ गते खिचडी बनाई खाने चलन रहेको छ । यो दिनलाई खिचरहवा भनिन्छ । माघी पर्वलाई नयाँ वर्र्षको रूपमा पनि लिने गरिन्छ । पुस मसान्तमा आ–आफ्नो लेनदेन, हरहिसाब चुक्ता गर्ने र माघ १ गतेदेखि नयाँ हिसाबकिताब सुरु गर्ने प्रचलन छ । पश्चिम नेपालमा गाउँको विकास कसरी गर्ने भन्ने उद्देश्यले बैठक बसेर सामूहिक रूपमा गत वर्षको काम कारबाहीबारे छलफल गरिन्छ । वर्षको एकपटक बस्ने गाउँको सो भेलालाई भुरा खेल–ख्याला भन्ने गरिन्छ । वैठकले गाउँको चौकीदार, फलामको काम गर्ने लगायत अगुवासम्मको छनोट गर्छ । माघीमा नै घरपरिवारभित्र होस् या गाउँ समुदायमा आगामी वर्षको लागि खेतीपातीलगायत यावत् अन्य व्यवहारहरूको नवीकरण गरिन्छ ।
नेपालका मगर जातिहरूमा माघे सङ्क्रान्तिलाई मुख्य पर्वको रूपमा धुमधाम सँग मनाउने चलन छ्र । पूर्व र पश्चिमका मगरहरूमा सामान्य भिन्नता भए पनि माघे सङ्क्रान्ति लाई मगर समुदायले तीन दिनसम्म धुमधामका साथ चेलीबेटी पुज्ने र पितृपूजा गर्ने पर्वका रूपमा मनाउने गरेको पाइन्छ । बालकहरू धनुकाँड खेल्दै माघे सङ्क्रान्तिमा रामरौस गर्छन् । बिना वनतरुल दिदी बहिनीलाई पूजा गर्न नमिल्ने मान्यता भएकोले पुस मसान्तमा दाजुभाइ तरुल खोज्न जान्छन् । घरमा बसेकाहरू धान कुट्दै, सख्खर तथा घरतरुल खनेर पर्व मनाउने तयारी गर्छन् । पहिलो दिन बिहान दाजुभाइले नुहाएर खाली पेटमा कुलकुलायन र पुर्खालाई पूजा गरेपछि दिदीबहिनीलाई निस्रोले पुज्ने गर्छन् । पूजा गर्दा थालमा अलिकति चामलका साथ विभिन्न तरुल, पुरी, मिठाई आदि खानेकुरा र दक्षिणा राखेर दिने चलनलाई निस्रो भनिन्छ । त्यसपछि वंशजका साथै विवाह गरेर छिमेकी गाउँठाउँमा पुगेका दिदीबहिनीलाई निस्रो बाँड्छन् । दोस्रो दिन युवतीहरू माघ खान (वनभोज जस्तै) समूह–समूहमा बाँडिएर गाउँभन्दा टाढा बर्खे गोठतिर लाग्छन् । दाजुभाइले निस्रोमा टक्राएको चामल र विभिन्न खानेकुरा बोकेका उनीहरू साथमा खाना पकाउने भाँडाकुँडा पनि लान्छन् । निस्रोमा आएको खानेकुरा र चामल त्यही दिन सिध्याउने चलन रहेकाले उनीहरू दिनभरिमा पाँच छ पटकसम्म त भातका विभिन्न परिकार बनाएर खान्छन् । पहाडका गाउँघरमा धानको उत्पादन थोरै भएर पनि होला, चामलको भातको चिज हुन्छ, त्यसैले त्यो दिन युवतीहरू अमन भइञ्जेलसम्म चामलबाट पकाइने विभिन्न परिकारको स्वाद लिन्छन् । कहिलेकाहीं घरबाट धनुकाँड खेल्दै त्यहाँ पुगेका युवाहरू रमाइलो र ठट्टा गर्ने पनि गर्छन् । साँझमा गाउँको चौतारामा भेला भएर युवायुवती दुबैथरी होम्पई (परम्परागत जातीय नृत्य) नाच्छन् । यसमा डोकोलाई सारी–चोलो, पोते–तिलहरी र चुरा लगायतका गहनाले सजाइन्छ । यो नृत्य र मेला हेर्न सबै गाउँको चौतारीमा भेला हुन्छन् । युवायुवतीको होम्पई नाच सिद्धिएपछि बूढापाकाको पैसारूपैचारु नाच सुरु हुन्छ । माघे सङ्क्रान्ति पर्व मनाउने क्रममा अन्तिम दिन गाउँभरिका पुरुष भेला भएर तारो हान्ने चलन छ ।
शरीर स्वस्थ राख्नु अति आवश्यक छ । आन्तरिक रूपले शक्ति प्राप्त गर्न पनि विभिन्न पोषक र उपयोगी परिकारहरू उपभोग गरी शरीर तन्दुरुस्त, फूर्तिर्लो पार्ने गरिन्छ । त्यसैले पनि माघे सङ्क्रान्ति पर्व सबैका लागि महत्वपूर्ण हुन पुगेको हो। अझ सहरी क्षेत्रका तुलनामा ग्रामीण भेगमा माघे सङ्क्रान्तिले तरुल, सख्खर, खुँदो, चाकु, चिउरासँगै त्यस मौसममा उपलब्ध हुने पोषक वस्तुहरू खाने र रमाइलो गर्ने गरिन्छ। यसबाट शरीरमा आरोग्य पाप्त भई परिवारमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना हुन्छ । आयु, आरोग्य, रूप र गुण अभिवृद्धिको प्रतीक भएर प्रत्येक वर्ष आउने यो पर्व हर्षोल्लासको वातावरणमा मनाइन्छ ।
फोटो क्रेडिट : होलिडेटुनेपाल डटकम बाट
प्रम ओलीलाई उछिन्दै ट्रेन्डिङमा १ मा
महान श्रीमान विनोदले कलाकार रुबिनालाइ सिन्दुर
चलचित्र गोर्खा वारियर २ को निर्माण
पुर्व सचिव नेपाल सरकार भिम उपाध्यायको